Hel Best Perian Alternative ee Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Video > Hel Best Perian Alternative ee Mac (Yosemite ka mid ah)
"Waxaan la riyaaqayaa Mountain Libaaxa laakiin waxaan si lama filaan ah isku aragto qeybtii in avi aan ee mar dambe la ciyaari in aan Quicktime. Waan ogahay kooxda uu abuurmay Perian sameynayo mar dambe update wax u. Sidaasi darteed waxaan rabnaa in aan weydiisan, waxaa jira kale oo kasta si Perian Mountain Libaaxa? "
- A user ka forum Macrumor
Haa, waa goosin ka mid ah war xun in kooxda horumarinta Perian ka furaysto-in u QuickTime ayaa mar dambe hayaa alaabta. Waxaa kuu soo farabadan oo dhib. Waxaad si lama filaan ah ay ku guuldareysato inay ka ciyaari AVI, FLV, wmv, iyo MKV iwm QuickTime ee Mac OS X, xataa marka la xariirta in Mountain Libaaxa. Dabcan, waxaa jira xal kale Perian doorashooyin aad u. Ciyaaryahanka VLC waa awoodaa inuu ciyaaro wax walba si aad u wanaagsan in Mac OS X (El Capitan ka mid ah). Sidaas darteed haddii aad samayn kartay oo aan QuickTime, VLC aanay sidaa u xumeyn doorasho. Laakiin haddii aad dhab ahaantii sida ay awoodaan in ay ciyaari AVI iyo walax kale oo QuickTime, oo u dhiganta kale Perian kugu habboon.
Taasi Wondershare Video Converter u Mac . Waxaa loogu badalo kartaa wixii video in QuickTime qaab socon video ee tayo sare leh, si ay QuickTime caashaqi jiray dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay ugu raaxaystaan ​​files ay warbaahinta aan walwal kasta. Iyo habka uu yahay mid aad u fudud oo degdeg ah. Just badalo kuwaas QuickTime-aqlka qaabab video sida AVI iyo FLV iwm in qaab saaxiibtinimo ka hor ciyaaro QuickTime.
Hel badalka ugu wanaagsan ee Perian adigoo gujinaya soo socda download link. Iyo tutorial hoose waa ku salaysan Mac madal, oo ay ku jiraan Mountain Libaaxa.
1 Import video files si video Converter arrintaasna El Capitan
Si toos ah drap & jeedi videos kombiyuutar si ay app this. Haddii kale, waxaad ka menu ugu weyn ee ay tagaan "File"> "Load Media Files" doorasho xitaa your computer Mac ka dibna dajiyaan doonayo aad video files.
2 Dooro qaab munaasib ah sidii qaab wax soo saarka
Sida aan ognahay, MOV waa qaab QuickTime file multimedia ah. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad ka ciyaari video kasta oo QuickTime, diinta video in MOV waa fikrad wanaagsan. Si aad u dooratid MOV sida qaab wax soo saarka, riix qaab icon hoose ee Murayaad diinta this app ee, ka dibna waxay doortaa "MOV" ka "Video" category ah ka dib markii liiska laga dhisayaa-up format. Dabcan, hadii aad rabto in aad ka ciyaari video in codsiyada kale sida Lugood iwm Mountain Libaaxa, MP4 M4V iyo sidoo kale aad doorato.
3 Beddelaan video on Mountain Libaaxa
In koonaha midig ee interface ugu weyn this app ee aad, riixi kartaa "Beddelaan" badhanka si loogu badalo video on Mountain Libaaxa. Tani Mac Video Converter taageertaa, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Libaaxa iyo sidoo.
Marka aad aragto icon ee app tani waxaa u boodaya on dekedda ah, waxaad tagi kartaa folder saarka caadiga ah si aad u ogaato faylasha wax soo saarka. Ka dib markii aad u samayn, kaliya jiidi mid ka mid ah si ay u QuickTime inuu u ciyaaro. Waxaad ka heli kartaa in la yaab leh, aad QuickTime ciyaarayaa files warbaahinta iyadoo wax dhibaato ah.
Sida loo Beddelaan WTV in MKV